सेतीको पुलमुनि भेटीयो यस्तो अब* स्थामा श *व ! क्रिसमसकै दीनमा के भ'यो यस्तो, यसरी निकाल्यो प्रह* रीले - Public 24Khabar
Home News सेतीको पुलमुनि भेटीयो यस्तो अब* स्थामा श *व ! क्रिसमसकै दीनमा के...
सेतीको पुलमुनि भेटीयो यस्तो अब* स्थामा श *व ! क्रिसमसकै दीनमा के भ’यो यस्तो, यसरी निकाल्यो प्रह* रीले
सत्तारुढ दल नेकपा विभाजन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ८ मध्ये आफूलाई साथ दिने ५ जना पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई समेटेका छन् ।
संसद् विघटनपछि नेकपा विभाजनमा ओलीलाई साथ दिएका रामबहादुर थापा पहिला नै गृहमन्त्री छन् । यसबाहेक अन्तिम समयमा साथ दिएका पूर्वमाओवादी नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र दावा लामा तामाङलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री बनाएका छन् । रायमाझी उर्जा, थापा खानेपानी, साह सहरी विकास, चौधरी श्रम र लामा खेलकुदमन्त्री भएका हुन् ।
यसबाहेक विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा एउटा गजबको संयोग पनि देखिएको छ । त्यो संयोग हो पूर्वमाओवादीभित्र पनि रायमाझी, साह र थापा तत्कालीन अवस्थामा बाबुराम भट्टराई समूहका नेता मानिन्थे । उनीहरु सबै तत्कालीन माओवादीमा पातलो मसालका रुपमा चिनिन्थे । भट्टराईले पार्टी छाडेपछि केही नेता उनीसँगै तत्कालीन नयाँ शक्तिमा गए भने बाँकी रहेका नेताहरु तत्कालीन माओवादीभित्र भिन्दै संगठित भएका थिएनन् ।
नेकपा विभाजनमा ती नेताले अहिले ओलीलाई साथ दिएका छन् । माओवादीभित्रको अन्तरसंघर्षको राजनीतिक इतिहासमा रायमाझीले सधै भट्टराईलाई साथ दिँदै आएका थिए । तर, संविधान जारी भएपछि ०७२ असोजमा भट्टराईले माओवादी छाडेर नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गर्दा भने रायमाझीले साथ दिएका थिएनन् ।
तर, माओवादीमा पुष्पकमल दाहाल र उनी निकट नेताहरुले रायमाझीलाई सधैंजसो भट्टराई निकट नेताको रुपमा चित्रण गर्दथे । यतिसम्म कि रायमाझी माओवादीभित्र भट्टराईको समूहबाट पटक-पटक मन्त्री बनेका थिए । रायमाझी ओलीको पहिलो कार्यकालमा पनि मन्त्री थिए ।
यसैगरी सहरी विकास मन्त्री बनेका साह पनि माओवादी आन्दोलनको इतिहासमा भट्टराई निकट नेताकै रुपमा चिनिन्छन् । नेकपा विभाजनपछि दाहाल र नेपालले अगाडि बढाएको पार्टीमा दुई अध्यक्ष भएकोमा लिखित असन्तुष्टि राखेका साह पनि तत्कालीन माओवादीमा भट्टराई समूहबाट विभिन्न जिम्मेवारी लिँदै आएका थिए ।
रायमाझीले जस्तै साहले पनि भट्टराईले माओवादी छाड्दा निर्णायक अवस्थामा साथ दिएका थिएनन् । मधेसमा दाहालले मात्रिका यादवलाई र भट्टराईले साहलाई अगाडि बढाउँदै आएका थिए । यतिसम्म कि एउटा हत्या अभियोगमा साहलाई भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा जोगाएको समेत आरोप लाग्दै आएको छ ।
यसबाहेक शुक्रबार खानेपानी मन्त्री बनेका थापा पनि कुनै कालखण्डमा भट्टराई निकट थिए । यद्यपि उनले जनयुद्ध चलेकै बेला २०६२ मा तत्कालीन माओवादी त्याग गरेर भिन्दै राजनीति सुरु गरेका थिए । तर, २०७३ मा उनी पुन: माओवादीमा फर्केका थिए । माओवादीमा फर्के पनि दाहालले उचित जिम्मेवारी नदिएको र सधैं केही सीमित मान्छेलाई सांसद र मन्त्री बनाएको भन्दै थापा असन्तुष्ट थिए । यहीकारण थापाले पछिल्लो पटक ओलीसँग निकटता बढाएका थिए । शुक्रबार मन्त्री बनेका रायमाझी र थापाबीच पनि राम्रो सम्बन्ध छ ।
बिहीबारको दाहाल–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी भएका लामाले शुक्रबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको शपथ लिएका छन् । लामा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभा उम्मेदवारमा पराजित भएका थिए । लामा तत्कालीन माओवादीमा रामबहादुर थापा निकट मानिन्थे ।
यस्तै, तत्कालीन माओवादीमा दाहाल निकट मानिएका चौधरीले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । चौधरी यसअघि कृषिमन्त्री पनि भएका थिए । भट्टराई निकट मानिएका नेता देवेन्द्र पौडेलले भने दाहाल नेपाल समूहलाई साथ दिएका छन् ।
Previous articleयत्रो पैसा बोकेर सडकमा रात बिताउने झापामा हेर्नुहोस (पुरा भिडियो हेरि सेयर गरिदिनु होला) Manav Sewa Nepal Tour Bhagya Neupane Jhapa
Next articleअ’न्तरजा’ तीय बि’बाह गरेको भन्दै आ’फ्नै दाईले बहि’नी लाई मा’ रीदिए दाजु र बहिनी बिच अनै* तिक सम्ब’ न्ध